Somaliland Oo Cadaysay Asbaabaha ay u qaadacday Shirka Brussels iyo Heshiiska Cusub | Salaan Media
Somaliland Oo Cadaysay Asbaabaha ay u qaadacday Shirka Brussels iyo Heshiiska Cusub
“Shirka waxaan uga gaabsanay inaanu ka qayb-qaadano isaga oo aan Somaliland siinin mudnaanta iyo maqaamka ay leedahay”
“Waxaan uga mahadnaqaynaa deeq-bixiyeyaasha sida ay u tixgeliyaan himiloyiinka shacabka Somaliland”
HARGEYSA (SM)- Xukuumadda Somaliland ayaa daboolka ka qaaday asbaabaha ay uga qeyb geli wayday shirka Brussels ee midowga Yurub qaadhaanka ugu ururinayaan Soomaaliya.
Sidaasna waxa lagu sheegay war-saxaafadeed uu soo saaray Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland Md. Axmed Yuusuf Cilmi (Suudi). Waxaanu war-murtiyeedkaasi u dhignaa sidan:-
“Xukuumada Somaliland waxay soo dhaweynaysaa kaalmadda bulshada caalamku ku kaalmeynayso gobolka Geeska Afrika. Taas oo sidaas ah hadana Somaliland go’aan adag ayay ka qaadatay in aanay ka qaybgelin shirka Heshiiska Cusub (New Deal) Brussels ee Soomaliya.
Shirka waxaan uga gaabsanay inaanu ka qayb-qaadano isaga oo aan Somaliland siinin mudnaanta iyo maqaamka ay leedahay. Isla markaana tixgelin rabitaanka shacabka Somaliland.
Wuxuu kaleoo muujinaya sawir khaldan in Dawlada Somalia ka taliso Somaliland. Dawlada Somaliland waa dawlad metesha shacabka ku doortay hab-dimuqradi ah. Mana jiri karto cid kale oo sinaba ku meteli karta danaha shacabka Somaliland.
Laakiin shirka maalinta kaliya ah ee ka dhacaya Brussels waa in aanu inaga ilduufin mudnaanta weyn ee ay maalintani leedahay. Maanta, Somaliland waxa ay u gudbaysaa weji cusub oo ah fullinta Qorshaha Horumarinta Qaranka. Shirka dhacaya Brussels ayay bulshada caalamku si rasmi ah ugu qoondaynaysaa hannaan gaar u ah Somaliland oo ku salaysan mabaadiida caalamiga ah ee Heshiiska Cusub ee lagula dhaqmayo wadamada tamarta yar . Hannaankan gaarka u ah Somaliland waxa uu noqon doonaa qaab-dhismeedka istaraatiijiyadda ay saaxiibada deeqbixiyeyaashu ku maalgelinayaan qaybaha mudan ee Qorshaha Horumarinta Qaranka Somaliland.
Hannaanka gaarka u ah Somaliland gebi ahaantiiba waa mid ka madaxbanaan ka Soomaaliya ee ay taageerayso bulshada caalamku. Mabaadiida iyo mudnaanta hagaya Hannaanka gaarka u ah Somaliland waxay ku dhisanyihiin go’aanka Dawladda Somaliland oo latashi buuxda la samaynaysa bulshada Somaliland. Waxaanu halkan u caddaynaynaa in Somaliland aanay aqbali doonin hanaan siyaasidaysan oo xambaarsan weedho daciifinaya ama dibindaabyeynayaa raadinta aqoonsiga ee Somaliland. Waxaan uga mahadnaqaynaa deeq-bixiyeyaasha sida ay u tixgeliyaan himiloyiinka shacabka Somaliland, iyo taageerada iskaashiga horumarinta ee tixgelisay duruufaha u gaarka ah Somaliland.
Sidaa awgeed, hannaanka Somaliland u gaarka ahi waxa uu xoojinayaa Sanduuqa Horumarinta Somaliland (SHS) ee ay aasaaseen xukuumadaha Denmark iyo UK sannadkii 2012, kaas oo xaqiijiyaanya maamul wanaag iyo xisaab celin laba geesooda ah isla markaana suurta gelinaaya in xukuumada Somaliland iyadu hogaamiso harumarka dalka. SHS waa mid imika si buuxda u hawl-gala. waa sanduuq horumarineed oo ay doorbidayso xukuumadda Somaliland kuna dhiirigelinayso deeq-bixiyeyaasha in ay ku soo biiraan isla markaana ay mucaawinadooda ku xoojiyaan SHS.
Labaatan sanno oo ay ku hawlanayd dhisida dawladnimo, Somaliland waxa ay seeska u dhigtay mustaqbal isbedel iyo koboc dhaqaale ku salaysan. Waddanku waa mid nabdoon oo xasilan; caruurteenu waxa ay haystaan fursad waxbarashada dugsiyada hoose oo bilaash ah; waxa aanu fidinay adeegyada caafimaad iyo biyo miyi iyo maagaalaba; muwaadiniintayaduna waxa ay si joogto ah uga qaybqaataan doorashooyinka dimuqraadiyadeed. Mahad waxa iska leh hannaanka adag ee maareynta xisaabaadka qaranka, kordhinta dakhliga cashuuraha iyo ka-hor-tagidda musuq-maasuqa. Miisaaniyadda Somaliland ee 2013 waatii ugu ballaadhnayd ee uguna dheeli-tirnayd ee soomarta taariikhda Somaliland. Sidaa awgeed, xukuumadda Somaliland waxa ay xoojisay dejinta jawi ay mucaawinooyinku ku samayn karaan saameyn weyn taas oo ay xukuumaduna ay dhabarka u ridanayso masuuliyadda hawlaha horumarineed.
Laakiin harumarkan kali ma sii wadi karo, waxa aanu u baahan nahay taageerada bulshada caalamka si aanu u xaqiijino himilooyinka Qorshaha Horumarinta Qaranka. In xidhiidh aanu la samayno saaxiibadayada horumarinta anaga oo u marayna qaab-dhismeedka Heshiiska Cusubi waa tallaabo weyn oo aanu ku xaqiijin karno himilooyinkeena.”